Zemana Antivirus ကို 2019 | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Zemana Antivirus ကို 2019: Anti-Malware ကို & Web ကိုလုံခြုံရေး
Zemana Antivirus ကို 2019: Anti-Malware ကို & Web ကိုလုံခြုံရေး APK ကို
* (ကျွန်တော့်ကို Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအင်္ဂါရပ်နှင့်၎င်း၏လုံးဝအခမဲ့ဆက်ပြောသည်!)
Anti-Malware ကို & Web ကိုလုံခြုံရေး: Zemana Antivirus ကို 2019 နှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကိုအဆင့်တက်။
Zemana Antivirus ကိုလုံခြုံရေးအသိုင်းအဝိုင်း join နဲ့:
✔သင် antivirus ကိုသန့်စင် Get
✔သင့်ရဲ့ Android device ကို 5x ပိုမိုမြန်ဆန်စကင်ဖတ်
✔ထိရောက်မှု adware ကိုဖယ်ရှား
✔ malware ကိုဖွိုဖကျြ
✔ * ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော် Anti-သည် keylogging ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ, သင့်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေ
✔ Block ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ (NEW & လုံးဝအခမဲ့)
Zemana Antivirus ကို & လုံခြုံရေး #1 Antivirus ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သား AVTEST အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ app ကို malware သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံအတွက်နေရာမရှိရှိပါတယ်ကိုယုံကြည်သောသူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့သင်တစ်ဦးကို malware အခမဲ့ခရီးတိုကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Zemana Antivirus ကို 2019 နှင့်အတူ: Anti-Malware ကို & Web ကိုလုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ Android device ကိုအထိရောက်ဆုံး antivirus ကိုနှင့် privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းမသက်ရောက်မှုရှိပြီးပါကအသုံးပြုရလွယ်ကူမယ့်တစ်ဦးပေါ့ပါးလုံခြုံရေး App ဖြစ်ပါတယ်။
ANDROID antivirus လုံခြုံရေး features
★ Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Feature ကို (NEW)
သငျသညျအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ (သာ Chrome ကို Browser ကို) မှကာကွယ်ပေးသည်
အလိုအလျှောက်အသစ်စက်စက် install လုပ်လိုက်တဲ့ applications များစိစစ်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့နိုင်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်ကိုစကင်ကိုအစပျိုးရန်မလိုအပ်ရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့ Android device ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကို malware, trojan, spyware, adware, keylogger နှင့်အခြားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုကနေ 24 /7ကာကွယ်ထားသည်။
★အလိုအလျောက် DB updates များကို
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုမှကာကွယ်နေဖို့ဒါကို up-to-date ဖြစ်အောင်ခြိမ်းခြောက်မှုဒေတာဘေ့စနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းအတွက်သင့်ရဲ့ Android device ကိုနေထိုင်စောင့်ရှောက်။
★ Anti-Keylogger ကာကွယ်မှု *
သင်ရိုက်ထည့်သမျှကိုခြေရာခံနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကီးဘုတ် applications များ, စကားဝှက်မန်နေဂျာနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ SMS ကို applications များ (NEW) ကို detect နှင့်လုပ်ကွက်။
★ 24 /7နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
စိုးရိမ်ပူပန်-အခမဲ့နေပါ။ ခြိမ်းခြောက်မှုတို့သည်ကွယ်ပျောက်မသွားချင်ပါဘူးပေါ်ထွက်လာခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသင့်ရဲ့ Android device ကို ချိတ်ဆက်. နှင့်ကိုယ်တိုင်ကို malware ကို clean up ပါလိမ့်မယ်။
★ Antivirus ကိုသန့်စင်
သင့်ရဲ့ Android device ကိုကအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကတိမ်တိုက် Scanner ရဲ့နဲ့အတူဗိုင်းရပ်စ်ကနေသန့်ရှင်းတဲ့စောင့်ရှောက်။ ဒီမှာပိုဖတ်ရန်: https://blog.zemana.com/release-notes-enjoy-new-zemana-mobile-antivirus-cloud-scanner/
Zemana Antivirus ကို & လုံခြုံရေးအခမဲ့ Install လုပ်ပြီးအမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး antivirus ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကို scan နဲ့သင့်ရဲ့ Android device ကိုအမြဲ malware ကိုအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
► Zemana Antivirus ကို & လုံခြုံရေးပရီမီယံဗားရှင်းယခု Upgrade နှင့်အဆင့်မြင့်နှင့်တက်ကြွသော antivirus ကိုလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်မျိုးစုံ devices တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Zemana Antivirus ကို & လုံခြုံရေး 16 ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်: အင်္ဂလိပ်, တူရကီ, စပိန်, ရုရှား, အီတလီ, အငျဒိုနီးရှား, ပိုလန်, ဗီယက်နမ်, ဘင်္ဂါလီ, ဒတျချြ, ဂျာမန်, ပေါ်တူဂီ, ဘော့စျနီးယားခရိုအရှေ, ကိုးရီးယား, ဟနျဂရေီ
* တချို့ကတရားဝင်ကီးဘုတ် applications များကသူတို့ကိုသင်ရိုက်ထည့်သမျှကိုခြေရာခံရရှိမှုပေးသောဟက်ကာများအားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောနေကြသည်; မှုဆန့်ကျင် keylogger မှသူတို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဖြစ် Zemana Antivirus ကို & လုံခြုံရေးများကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် blog post: အထဲက Check:
- အန်းဒရွိုက်9ယခုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။
- အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် '' လိုင်စင်ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်ခဲ့ကြရသောပြဿနာ Fixed ။
- အချို့သောကိရိယာများပေါ်တွင်ဖတ်လို့မရအောင်ခဲ့သည့် Fixed အကြောင်းကြားစာရဲ့စာသား။
Zemana Antivirus ကို 2019: Anti-Malware ကို & Web ကိုလုံခြုံရေး
5.72 ကို MB